चाेरी भएकाे माेटरसाइकल पाए पछि बैठा खुशी
by कालिका टाईम्स २७ पुष २०७६ १५:०० 12 January 2020 01230
पर्सा । ईलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीया मातहतका प्रहरी युनिटहरु गस्तीलाई तिब्रता दिए पछि धामाधाम चोर, अभियुक्त र अपराधीहरु पक्राउ पर्न थालेका छन । गएराती पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सबैठवाबाट ७ दिन पहिला चाेरी भएकाे माेटरसाइकल प्रहरीले फेला परेकाे छ ।
भारतको पश्चिमी चम्पारणमा पर्ने सिक्टा निवासी सुनिल बैठाको एक हप्ता अगाडी चोरी भएको मोटरसाईकल सबैठवा गाउँमा फेला परेकाे हाे । सबैठवामा सांझ ७ बजे माेटरसाइकल व्यवारिसे अवस्थामा फेला परे पछि स्थानियहरु प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यस पछि व्यवारिसे अवस्थामा फेला परेकाे माेटरसाइकल प्रहरी चाेकी सबैठवाले आफ्नाे नियन्त्रणमा लिएर इलका प्रहरी कार्यालय पाेखरियालाई बुझाएकाे थियाे ।
माेटरसाइकल बारे प्रहरीले अनुसन्धान गरी आज माेटरसाइकल धनी सिक्टा निवासी बैठालाई बुझाएको हाे । फेला परेकाे बिआर ०५ ए ८५४० नम्बरको १ सय ६० सिसिको अपाची रातो रंगको मोटरसाईकलको अगाडी र पछाडी दुबै तिर रहेको नम्बर प्लेट चाेरले उखेलेर फालेदिएका छन् ।
चाेरी भएकाे माेटरसाइकल सिक्टाका निवासी मोटरसाईकल धनी बैठाले पाए पछि खुशी भएका छन् । माेटरसाइकल पाएकाे खबर पाए पछि इलाका पहरी कार्यालय पाेखरियामा बैठा पुगी माेटरसाइकलकाे कागज देखाउदै आफ्नाे माेटरसाइकल बुझ्दै खुशी खुशि व्यक्त गरेका थिए ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीया मातहतका सबै प्रहरी युनिटहरुको केही दिन अगाडी बसेकाे बैठकमा डयुटीलाई सक्रिय बनाउन प्रहरी निरिक्षक चन्द्र कुमार सिंहले निर्देशन दिएका थिए । त्यस पछि प्रहरी कार्यालय पाेखरिया क्षेत्रबाट चोर, अपराधी, फरार अभियुक्तहरु समेत पक्राउ पर्न थालेका छन ।
केही दिन पहिला मात्र पाेखरियाकाे एक घरमा चाेरी गरेकाे चाेरलाई शनिबार इलाका प्रहरीले चाेरेकाे सम्मान सहित पक्राउ गरेकाे थियाे । यस्तै केही दिन भित्र मात्र दर्जनाै फरार अभियुक्तहरुलाई समेत प्रहरी कार्यालय पाेखरियाले पक्राउ गरि बुझाइसकेकाे छ ।
असल, कर्मठ र ईमान्दार प्रहरीले दोषी, अपराधी, चोर र अभियुक्तलाई नछाडने ईलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरिक्षक चन्द्र कुमार सिंहले बताए ।
SQL requests:140. Generation time:1.130 sec. Memory consumption:13.81 mb